Ka Ganacsiga Beedka iyo Hilibka Digaagga oo Noqday Maalgashi iyo Ildhaqaale oo Somaliland Ka Hirgalay
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa jamhuuriyadda Somaliland ku soo badanayay dadka muwaadiniinta ee maalgashiyada kala duwa dalka ku samaynayay waxaanay dalka ku soo kordhiyeen waxyaabo badan oo ay ku abuurayaan fursado maalgashi.
Waxaanay noqotay dhaqashada digaagga iyo ka ganacsiga beedka iyo hilibka digaaggu suuq ganacsi iyo il dhaqaale oo Somaliland u soo korodhay iyo suuq daboolay baahi badan oo loo qabay beedka iyo hilibka digaagga oo ka iman jiray markii hore dalal kala duwan o dibedda ka ah Somaliland.
Dhinaca kale Xukuumadda Somaliland,ayaa joojisay oo dalka ka mamnuucday in dibeda laga soo geliyo hilibka Digaagga iyo Beedka joojintaasina waxay kor u qaaday wax soo saarka Beedka iyo Hilibka digaagga ee ay soo saaraan shirkado dhawr ah oo dad muwaadiniin reer Somaliland ahi ay dalka ka jirgaliyeen.
Haddaba waxaa loo baahan yahay in shirkadaha muwaadiniinta reer Somaliland ay maal galiyeen ee lagu dhaqay digaagga isla markaana kor loogu qaaday wax soosaarka Beedka dalka iyo hilibka digaaggu in uu noqdo mid la ilaaliyo caafimaadka digaagga iyo beedka iyo hilibkaba,taasoo meesha ka saaraysa in ay dhibaato la soo deristo ganacsiga maalgashi ee ay dalka ku soo kordhiyeen dadka muwaadiniinta ah ee abuuray shirkadaha digaagga ee dalka ka hirgalay.
Markasta oo la ilaalityo tayada wax soo saarka lagu tabcay lana dhawro caafimaadkiisa waxay taasi kor u qaadaysaa suuq geyntiisa iyo inuu yeesho sumcad iyo kalsooni ay bulashdu ku qabto.